नेपालमा रहेको जारि लकडाउन अझै लम्बिने ! – Shalom Nepal
नेपालमा रहेको जारि लकडाउन अझै लम्बिने !
Posted on July 20, 2020 July 20, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – नेपालमा रहेको जारि लकडाउन अझै लम्बिने भएको छ । यस विषयमा सरकारले आज मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यसबारे निर्णय लिने भएको छ। बिगतमा भएको लकडाउन साउन ७ सम्मका लागि रहेको र उक्त लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरिने भएपनि लकडाउनको ढाँचा भने केहीमात्रामा परिवर्तन हुनेछ । विगतमा भैरहेको भन्दा लकडाउन केही मात्रामा अझै खुकुलो बनाइने सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले लकडाउनको नयाँ ढाँचाबारे प्रस्ताव तयार गर्दैछ । जुन प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि लगिदैछ । नयाँ ढाँचाका अनुसार कोभिड-१९ रोकथामको उपायसहित विभिन्न क्षेत्र विस्तारै खोल्न दिने सरकारको तयारी रहेको छ । जसमा ठुला-ठुला होटल तथा रेष्टुँरेन्टहरु निश्चित मापदण्डमा रहेर खोल्न दिइने छ भने शैक्षिक संस्थाहरुको लागिपनि कसरि खोल्ने भन्नेबारे छलफल बढाइएको छ । मनोरञ्जन स्थल, धार्मिक क्षेत्र र शैक्षिक संघसंस्थाहरु अझै केही समय बन्द राखिनेछन् ।
यहाहरूलाई अवगत गराउन चाहान्छु, सार्वजनिक यातायातहरु आधा सिटमा सञ्चालनमा आएका छन् भने उद्दोग व्यवसाय पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मनोरम दृश्य सहित पहिलो पटक ख्रीष्टीयन म्युजिक भिडियो सार्वजानिक
Posted on August 16, 2020 August 16, 2020 Author Shalom Nepal
ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजीदेम्वा गाउपालिका वडा नं.–१, मा स्थानीय स्तरमा छायाँकन र सम्पादन सम्पन्न गरी सु-समाचारीय ख्रीष्टीयन म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरीएको छ । ओखलढुङ्गा जिल्लाको अति नै विकट मानिने रगनी र पोकलीको केही मनोरम दृष्यहरु कैद गरी छायाँकन गरीएको मेरो गीतको भाकालाई …नामक गीतको म्युजिक भिडियो रगनी शालोम ए.जी. मण्डलीमा एक भेलाको साथमा प्रिमियर सो गरि […]
पा. केशब आचार्य धराैटीमा रिहाई
Posted on June 29, 2020 June 29, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – कास्की जिल्ला अदालतबाट गत बैशाख ३१ धराैटीमा रिहाई हुने बित्तिकै पुन : जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाेल्पाले प्रहरी प्रतिबेदन तयार गरि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाेल्पा लगिएका पास्टर केशब आचार्य अनुसन्धान पश्चात् पेस गरेकाे बयान र उहाँकाे माेबाईल फाेन भित्र रहेकाे फाेटाे र भिडियाेको आधारमा धर्म परिबर्तन सम्बन्धि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको […]
परमेश्वोरले तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ ।
तपाई एक्लो हुनुहुन्न!
बिनोद याख्खाको निर्देशन तथा छायांकन मा इसाई जगतकै ऎतिहासिक म्युजिक भिडियो (बादलपारी) सार्वजानिक
Posted on October 3, 2020 October 3, 2020 Author Shalom Nepal
नाकामा सेनाको सुरक्षा सहित भोलिदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा केहि खुकुलो
Posted on September 9, 2020 September 9, 2020 Author Shalom Nepal
Posted on October 29, 2020 October 29, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on October 11, 2020 October 11, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on October 3, 2020 October 3, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on September 28, 2020 September 28, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
Posted on September 9, 2020 September 9, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
स्वतन्त्र——————–(कथा) October 29, 2020
हिरो —————————-(कथा) October 11, 2020
बिनोद याख्खाको निर्देशन तथा छायांकन मा इसाई जगतकै ऎतिहासिक म्युजिक भिडियो (बादलपारी) सार्वजानिक October 3, 2020
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको १३ औं राष्ट्रिय भेला भव्य रुपमा सम्पन्न September 28, 2020